Waxaa loo bandhigi doonaa Raiisel Wasaaraha Wadada Tareenka ee Sakarya-Karasu, oo shaqadiisa la joojiyay | RayHaber | raillynews
HometareenkaNidaamka Isgaadhsiinta ee IntercityShaqada waxaa loo soo bandhigi doonaa ra'iisul-wasaaraha oo loogu talagalay Duran Sakarya-Karasu Tareenka
01 / 11 / 2013 Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Working Duran Sakarya-Karasu Ra'iisul Wasaaraha for Railway faylka in la soo gudbiyaa Sakarya Rugta Ganacsiga ee shirka Golaha caadiga October ka hadlayay Madaxweynaha SATSO Mahmoud Kösemusul, Karasu Port of Karasu-Sakarya in ay rajeynayso in dhamaystirka tareenka, "Waxaan rabnaa in aan ku dhameysan sida ugu dhakhsaha badan tareenka. Waxaan helnay macluumaad ah in miisaaniyadda loo qoondeeyey shaqada kaabayaasha. Waxaan qorshaynaynaa inaan dhibaatooyinka u gudbino Ra'iisul Wasaaraha faylalka maalmaha soo socda. "
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Sare ee Sakarya Shirkii Golaha Wakiilada bishii October waxaa guddoomiyay Guddoomiyaha Golaha Wakiilada A. Akgün Altuğ. Ka dib doorashadii codbixinta iyo ajandaha ajendaha, daqiiqadaha xildhibaan 1093 ayaa la falanqeeyay oo loo codeeyay.
Bishii Oktoobar, Katı Mizan iyo warbixintiisa la socoshada iyo Miisaaniyadda Miisaaniyadda ayaa lagu ansixiyay ka dib markii Melih Kaykayoğlu, Guddoomiyaha Guddida Dib u eegista Xisaabtarku, akhriyo.
The Board of Directors of bixinta macluumaadka ku saabsan Guddoomiyaha SATSO hawlaha bil kasta Mahmoud Kösemusul gaar ahaan September dhoofinta of our gobolka ka muujiyay soo socda uu hadalka bilaabay adigoo adkaynaya in ka farxiya oo wakiil ka ah dhaqaalaha: "In qaabka guud ee aragtida 2023 oo ay si kalsooni leh u guurayaan dhinaca gool our. Kororka dhoofinta ee Sakarya wuxuu ku qanacsan yahay. Marka aynu eegno miisaanka guud marka la eego dhoofinta, halkii uu yareyn lahaa korodhka iyo hoos u dhaca, kor u kicinta guud waxay naga dhigaysaa rajo mustaqbalka ah oo nagu hagaya inaan la shaqeyno hamiga iyo hamiga badan. Sicir-wareerka September ee Sakarya waxaa lagu qiyaasey 214 million 813 kun doolar. Marka 2013 tirakoobyada bil kasta ee bisha Janaayo iyo Sebtembar la qiimeeyo; Sakarya, 9 bilyan 1 583 million 215 kun oo dollar marka la barbar dhigo isla xilligan oo kale sanadkii hore, 12,7 ayaa kordhay iyo liiska 9 ee gobolada dhoofiya. xajistay booska xiga. magaalada Our marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay September dhoofinta kordhay 40 boqolkiiba, iyo Turkey ayaa hadhay ka sarreeyaa celceliska. "
"Sida Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Sakarya, waxaan ka akhrisanay ganacsiga adduunka oo tallaabo qaaday. Kosemusul ayaa xubin ka ah golaha ku wargeliyey tababarka SATSO iyo tababarada la qorsheeyey mudada soo socota.
Kösemusul, SAT SATSO ujeeddadeedu waxay tahay in aad sheegto inaad tahay xog raadin ku filan, SATSO cusboonaysiinta boggayaga internetka. Waxbarashadu waa isha joogtada ah iyo isbedelka. macalimiin tayo leh ugu kalsoonaan karo Turkey iyo hay'adaha, waxaan sii kordhaya hawlihiisa aan abaabulo tababar oo wadajir ah. Bishii Oktoobar, waxaan fulinay qanacsanaanta macaamilka iyo isgaarsiinta, Tababarka Dadweynaha, Motivation and Self-Confidential training, Bamka kulayliyaha iyo barnaamijyada tababarka qolalka qaboojinta ee qaybta adeega. Waxaan doonayaa in aan la wadaagno barnaamijyada tababarka mustaqbalka sidoo kale xildhibaanada soo faragaliso our: Tababarka Aid First, Sales Shaqaalaha Tababarka ee Warshadaha Tafaariiqda ah, Roadmap Management ah, ka hadalno wax ku ool ah iyo yeerista, dadkana qiimeeya, Communications Corporate wax ku ool ah oo awood No Dice in Tabaha, Better Sidee Sales, Suuq Oo tababarka ee dhinacyada soo ururinta-to mawduucyada Waxa ay noqon doontaa. Waan ognahay in shaqada loo shaqeeyaha ee aan hagaajin naftiisa ama shaqaalihiisu ay adag tahay. "
Shaqada joogo set-up iyo macluumaad bixinta in xubno ka tirsan baarlamaanka oo ku saabsan ka socda abaabulan Zone Industrial Guddoomiyaha Kösemusul, "Waxaan, warshadaha in nijaasayn deegaanka iyo xoogga Sakarya qurux badan, waxaan rabnaa in aan la geeyay OSB ah gacanta. Si loo soosaaro warshadaha ka baxsan dhulalka qiimaha leh ee qiimaha leh, waxaan si gaar ah ugu niyadjabnaa afhayeenka baarlamaankeena iyo maamulkiisa, ayuu sheegay inuu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda warshadaha joogtada ah. Mahmut Kösemusul wuxuu sidoo kale siiyey macluumaad ku saabsan xaaladda ugu dambeysa ee ka jirta OIZs oo yiri:
"Waxaan dooneynaa in aan si joogta ah u horumarino iyo habka loo xakameeyo, ka fogaanshaha warshadaynta isbedbedelka adoo sii ballaarinaya ODM 1. Ku saabsan 12-13 1 ayaa loo furay dib u dhiska sanadihii hore. Laba sano ka hor, waxaan u shaqeynay inaan ku darno gobol waqooyiga OIZ ku leh OIZ. Hase yeeshee, waxaa loo diidey sababo dhowr ah. Xilligan, shaqadayadu waa 1. OIZ ayaa la ballaarin doonaa, waxaana lagu gaari doonaa horumarka joogtada ah iyo kobcinta warshadaha. Waxaanu Sakarya siin doonaa aagga kobaca cusub. Xiritaan 2. Waxaa jira hal xashiish madhan oo ka baxsan OIZ. Wadiiqooyinka wadada waxay sii soconayaan Söğütlü OIZ. Kaabayaashu waxay la shaqeeyaan Ferizli OIZ. Waxaanu dooneynaa inaan si dhakhso ah u dhamaystirno gobolka. Dhismaha Kaynarca ee Farsamada Gaarka ah ee Dhismaha, dhamaystirka faylasha la qaado ee dhammaadka sanadka ayaa shaqo bilaabi doona sanadka soo socda. In SAMIB Zone Specialized Industrial Zone, waxaanu qorsheyneynaa inaan si dhakhso ah u dhamaystirno sahaminta goobta. Waxaan dalbaday codsiyo PVC-ga ah ee OIZ, Automotive Specialized OIZ iyo Geyve Gıda Special OIZ, ka dibna baadhitaanada goobta ayaa la sameyn doonaa. Nidaamyadani, waxaan ku xayirnaa xafiisyada xagjirnimada. "
Port Karasu iyo tareenka Sakarya, iyadoo dhamaystirka dareen dhaqaale, in la sii wado weyn hadda u boodboodi doonaa oo wakiil ka hadalka Madaxweynaha Mahmoud Kösemusul, "Port Karasu waa noo muhiim, in meesha shirkadda sidoo kale Karasu - sugaya tareenka in la dhameystiro inta u dhaxaysa Sakarya. Waxaan dooneynaa in tareenka la dhamaystiro sida ugu dhakhsaha badan. Waxaan helnay macluumaad ah in miisaaniyadda loo qoondeeyey shaqada kaabayaasha. Waxaan qorshaynaynaa inaan dhibaatooyinka noogu soo gudbino Ra'iisul Wasaaraha faylalka maalmaha soo socda. Waxaan sameyn doonaa dadaal kasta si aan u hubino in dekadda la dhameeyo oo loo hawlgalo. Awooddeena ugu wayni waa midnimo. Waad ku mahadsan tahay, ururkani wuxuu naga caawin doonaa dhammaan himilooyinkayaga. Sida SATSO, had iyo jeer waxaan la soconaa soo saaraha. Waxaan dooneynaa in aan warshadeyno ilaalinta dhulalka beeraha ee beeraha ah iyo in la abuuro astaanta buqcaddaan iyada oo taageero la siinayo.
Xarunta Soogalootiga ee Trabzon Logistics Center
Kocaoğlu wuxuu Ankara u diray faylka 5
Tirada shirkadaha helaya faylasha Nidaada Narlıdere waxay kordheen 30
Faylka 9 faylasha wadooyinka
Automotive Giant BMC's Sakarya Karasu Factory ayaa la dhigay
La xiriir Mahmut si toos ah
Saldhigga tareenka xawaare sare
Mashaariicda lagu horumarinayo Samsun iyo Mashruuca Gaadiidka Targeted